Isibonelelo-i-Andeli Group Co, Ltd.
Umatshini wokuwelda we-ARC
Umatshini wokuwelda we-TIG
Umatshini wokuwelda we-MIG
SIKA umsiki weplasma
Ifakwe kumatshini wokuwelda weARC
Senza i-100% yemizamo yethu kuphando lwetekhnoloji kunye nokwandiswa kwemigca yeemveliso zombane ze-LV kunye ne-HV kuphela. Ngamava angaphezulu kweminyaka eli-10, sinolwazi olungundoqo lobuchwephesha kwiimveliso zombane kunye neze-elektroniki kunye namawaka eemveliso ezisemgangathweni ekukhetheni abathengi.
Sisoloko siqhotyoshela ukubaluleka kakhulu kumgangatho kunakubungakanani E-Andeli, yonke imveliso kufuneka ithobele inkqubo engqongqo nepheleleyo kunye nomgangatho osuka kuphando, uyilo, prototype, ukhetho lwecandelo, imveliso yovavanyo, imveliso yobuninzi, kulawulo lomgangatho. Kwimicimbi yolawulo, sinenkqubo esebenzayo yolawulo lweekhompyuter ukusuka ekufumaneni iiodolo kwisebe lezentengiso ukuya ekuthumeleni ukuqinisekisa eyona nkonzo yethu ilungele abathengi bethu.
Siyaqonda iimveliso zombane kufuneka zihlangabezane neemfuno zesicelo ngezixhobo zokugqibela zabathengi. "Ukwaneliseka kwabaThengi" ngamandla akhuthazayo okukhula kwexesha elizayo kukaAndeli. Siyakholelwa kakhulu ukuba uya kuyanelisa iinkonzo zethu zizonke, nokuba imeko injani, ixesha lokuphendula, ulwazi olunikezelwayo ngaphambi kwentengiso, inkxaso yezobuchwephesha, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, iinkonzo zasemva kokuthengisa, kunye nomba webango lomthengi.
Sigxininisa ulawulo. Ke, ngokuqhubekekayo similisela ukuqonda, ukubekwa emgangathweni kunye nokwenza ikhompyuter kuko konke ukuhamba komsebenzi ukuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi. Kwa-Andeli, omnye umqeshwa uhlala ekwazi ukuhlawulela abasebenzi aba-2-3 ukulayisha kwezinye iinkampani. Kungenxa yoko le nto sinokunciphisa iindleko zethu zizonke kwaye sinciphise amaxabiso kubathengi bethu minyaka le.
Siyaqonda ukuba abantu zezona asethi zixabisekileyo. Ukhathalelo malunga nokukhula komqeshwa, ukubonelela ngenkqubo yemfundo efanelekileyo, ukwakha imeko yokufunda kunye nomoya wokuyila ngokutsha unika amandla okuqhubela phambili ekukhuleni kwethu kwikamva.
Namhlanje, u-Andeli uye waba ngomnye wabenzi abaphambili e-China, ngakumbi kuhlobo oluqhelekileyo lwentsimi yombane. Indawo yethu yokugcina impahla engama-500M2 isivumela ukuba sigcine isitokhwe esaneleyo sama-30% eemodeli ezisemgangathweni zokuhambisa ngokukhawuleza. Sikwabonelela ngenkonzo eyenziwe ngumthengi (i-ODM) enokuhlangabezana neemfuno ezizodwa zomthengi ngexesha elifutshane lokuphuhlisa.
Okwangoku, sinabahambisi abakhethekileyo be-10 kunye namawaka abathengi abaqhelekileyo abekwe kumazwe angama-50 kwihlabathi liphela. Ngokusekwe kuyilo lwethu lweminyaka eli-18, ukuvelisa kunye namava okuthengisa kwicandelo lombane, sikholelwa kakhulu ekubeni lingangumlingani wakho ogqwesileyo nonokuthenjwa ngonaphakade kulo mgca.
Okokugqibela, singathanda ukuxabisa inkxaso yangaphambili evela kubaxumi bethu behlabathi ukuba ibe nguAndeli wanamhlanje. Silindele ukufumana inkxaso yakho eqhubekayo kwaye unokuba liqabane lakho elifanelekileyo nelithembekileyo ngonaphakade.
Imbuyekezo Andeli Group Co., Ltd.
© Copyright -2020 - 2022 Inkxaso yobugcisa: